Burcad Badeed Soomaaliyeed oo sii daayay Markab ay Madaxfurasho u haysteen • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Burcad Badeed Soomaaliyeed oo sii daayay Markab ay Madaxfurasho u haysteen
Burcad Badeed Soomaaliyeed oo sii daayay Markab ay Madaxfurasho u haysteen
Kooxaha Burcad Badeeda Soomaalida ayaa waxaa ay si daayeen markab xamuul ah oo ay gacanta ku hayeen mudooyinki la soo dhaafay.
Afhayeenka Ciidamada Ururka Midowga Yuruub ee Soomaaliya John Harbour oo goor dhowayd u waramaayay Horseed Media isagoo ku sugan magaalada London ayuu sheegay in markabka la si daayay duhurnimadi maanta isla markaana u ku si jeedo mid ka mid ah Dekadaha ku yaala Wadamada Geeska Afrika,isagoo uusan carabaabin wadamada ay u kala dhashteen.
Mr.Harbour ayaa sidoo kale sheegay in shaqaalaha saaran markab ay tiradooda guud tahay 10-qof,oo 7-ka mid ah ay u dhasheen dalka Sri Lanka halka 3-da kale ay u dhasheen dalka Filipiin.
Waxaana u ka gaabsaday in u faahfaahin ka bixiyo in Burcad Badeeda la siiyo lacag madaxfurasho ah iyo in kale,waxaana u ugu dambeynti sheegay in ay si adag ula dagaalami doonaan Burcad Badeeda Soomaalida.
Waxaa weli ku jira gacanta burcadbadeeda Soomaaliyeed maraakiib kor u dhaafaya 10 oo ay saaran yihiin in ka badan 264 shaqaale ah, kuwaas oo dhamaantood ay ka sugayaan madaxfurasho malaayiin Dollar ah.